Caqli: Maxaad u Baahan tihiin Backlinks Si Olole Nadaama ah oo guul leh
Internetku wuxuu bixiyaa khayraad weyn oo loogu talagalay dadka doonaya inay fuliyaan hawlahooda ganacsi e-ganacsi. Shirkadaha waaweyn waxay ka faa'iideystaan ​​isticmaalka suuq-geynta suuqa . Iyadoo loo marayo xeeladaha qaarkood sida suuqgeynta suuq-geynta , waxaa suurtagal ah in la helo malaayiin macaamiisha online ah kuwaas oo soo iibsan kara alaabtaada. Qaar ka mid ah hababkani waxay ku jiri karaan qaar ka mid ah xirfadaha Warbaahinta Bulshada iyo sidoo kale kuwa kale sida SEO. Search Engine Dhiirigelinta wuxuu isticmaalaa qalabka falanqaynta makiinadaha raadinta. Iyadoo loo marayo SEO, waxaa suurtagal ah in la qaado malaayiin qof oo martida ah kuwaas oo raadinaya ereyo gaar ah oo ku yaalla webka.
SEO wuxuu ka shaqeeyaa habab kala duwan. Mid ka mid ah habka ugu fiican ee SEO ah waa iyada oo loo marayo dib-u-hagaajin. Ganacsi kasta oo online ah wuxuu ubaahan yahay noocyada dhabarka ah ee loogu talagalay Ololaha SEO . A newbie ayaa laga yaaba in ay la yaabto farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan ee dhabarka. Backlinks waxay noqon kartaa waji muhiim ah ololaha suuq-galkaaga internetka.
Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Sare , ayaa halkan ku daraya hababka hababka backlinking:
1. Isticmaal dhabarka bogagga macluumaadka
2. Backlinks waxaa lagu kasbaday farshaxan
Mid ka mid ah siyaabaha loo adeegsan karo waxyaabaha fayraska keena waa iyada oo la wadaagayo. SEO waxay ku xiran tahay wadaag aad u ballaaran oo suurtogal ah in warbaahinta bulshada. Infographics waxay dhiirigelisaa isticmaalayaasha in ay wadaagaan waxyaabaha ku jira macnaha. Tusaale ahaan, isticmaalka joornaalada ee warbaahinta bulshada ayaa kicin kara weyn ka dib. Natiijadu, shabakadda oo idil waxay heli kartaa dad badan oo marti u ah macaamiisha 'dhamaan aduunka oo dhan oo riixaya xariirkaaga boggaaga. Backlinks oo ka soo jeeda meel kale duwan waxay awood u leedahay in ay hey'addaha sameyso shabakad heer sare ah.
3. Backlinks oo laga helo bogag aan faa'iido doon ahayn
Qaar ka mid ah boggaga aan faa'iido doonka ahayn ayaa ka faa'iideysta isticmaalkooda iyaga oo bixinaya isku xirnaanta isticmaaleyaashooda isticmaala badhanka deeqda. Tusaale ahaan, waxaad ku dallaci kartaa urur aan faa'iido doon ahayn oo ku dhex jira naftaada. Waxay kuusoo diri karaan xiriirka isku xirka ama martida martida kuwaas oo ka faa'iideysan kara xirfadahaaga suuqgeynta ee boggaaga. Meelo badan ayaa aqbala bixinta deeqda ah isku xidhka. Marka ay muuqdaan, ku siiyaan, gadaashu waa bilaash, sidaa daraadeed waa kuwa ka faa'iideysanaya taraafikada bogga . Xulo ilaha dhabarkaaga dhabta ah
Search Engine Optimization waa habka suuq-galka ee casriga ah kaas oo ka dhigi kara shirkad inay kordhiso iibkooda si degdeg ah SEO-ku raadinayso inay sii wanaajiso joogitaanka website-ka ku saabsan makiinadaha raadinta, kordhinta wacyiga caanka ah iyo ugu dambeyntii hagaajinta habka isku xirka. Ganacsade cusub ayaa laga yaabaa inuu ka walwalo sidii loo ogaan lahaa noocyada kala duwan ee dib u qaabeynta iyo sida ay u saameynayaan bogga internetka iyo waxqabadka SEO. Qaar ka mid ah xiriirada khuseeya ayaa ku jira maqaalkan.
Waxaad awood u leedahay in aad sameysid dib-u-celin madax-bannaan oo aad ku sameysid goobtaada oo samaynta geeddi-socodka oo dhan lagu guuleysto Source .